राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न- के हुन्छ अबको बाटो ? - EAAWAJ (इ-आवाज)
राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न- के हुन्छ अबको बाटो ?
काठमाडौं । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, राष्ट्रपति बन्नुपूर्व विद्यादेवी भण्डारी नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष थिइन् । राष्ट्रपति भइसकेपछि पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले उनले एमाले छाडिन् । त्यसबेला जनताको स्वाभाविक अपेक्षा थियो- अब उनी पदले मात्रै होइन, प्रतिष्ठाले पनि कुनै दलविशेषको नभएर देशको अभिभावक बनुन् ।
← भारतको मुम्बईमा आगलागी हुँदा १४ जनाको मृत्यु, ३८ घाइते
आईफोन स्लो भएकोमा एप्पलले माग्यो माफि, कम्पनीविरुद्ध पर्यो ८ वटा मुद्धा →